Kinotehnik ၏ Practilite Kit သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိစဉ် Firstline Creative ကိုထွန်းလင်းပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Kinotehnik ရဲ့ Practilite Kit အခါလမ်းမပေါ်တွင် Firstline ကို Creative တောက်ပထွန်းလင်းကူညီပေးသည်
Kinotehnik ရဲ့ Practilite Kit အခါလမ်းမပေါ်တွင် Firstline ကို Creative တောက်ပထွန်းလင်းကူညီပေးသည်
မာ့ခ်ပုံပြင်။ ဒါဟာသူ့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပုံပြင်များပြောပြနေတဲ့လူနေမှုစေသည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့တိကျအမညျကိုဖွင့်, Firstline ကို Creative & မီဒီယာ နှင့်၎င်း၏အများအပြား clients များ။ Firstline အတ္တလန်တာအခြေစိုက် full-service ကိုထုတ်လွှင့်မီဒီယာဆက်ဆံရေး, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်, ကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများအတွက်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးခြင်းတစ်နယ်ပယ်မှထွက်ထွင်းထုထားသည်။ ဒါကမကြာခဏခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဘဏ်ဍာရှိရာတစ်ဦး "တဦးတည်းလူတီးဝိုင်း" ဟုအဆိုပါစံလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။
မိမိအပုံပြင်များပြောပြကူညီပေးဖို့, မာ့ခ်အမြဲတမ်းသုံးအလင်း pack မှာ Practilite 602 ကနေ LED ကို Fresnel ကိရိယာအစုံ Kinotehnik ။ "အများစုကအကြိမ်သည်ဤအညွန့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ရုံးခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူနာရဲ့အိမ်မှာနေကြတယ်" ဟုမာ့ခ်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာချုပ်ထားဧရိယာရဲ့တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုရုံး setting ကိုအတွက်, သငျသညျအပူ generate နှင့်ဖျန်းစနစ်အားပိတ်ထား set သွားမယ့်တစ်ဦးအလင်းချင်ကြဘူး။ "
အဆိုပါ Practilite 602 LED ကို Fresnel မှ Kinotehnik 3000 ထံမှ 6000K ဖို့ variable ကိုအရောင်အပူချိန်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် 96 တစ် CRI နှင့်အတူအရောင်-မှန်ကြောင်းသေးငယ်ပေါ့ပါးသောအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအယ်လ်အီးဒီအပူ generate ပါဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကို Practilite 602 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ခုပေါင်အလေးချိန်။ "လူတစ်ဦးကိုအလွယ်တကူလေယာဉ်ချွတ်နှင့်တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီးထဲသို့ပစ္စည်းအားလုံးရဖို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်" ဟုမာ့ခ်ကပြောပါတယ်။
"အဲဒီမှာစျေးကွက်အပေါ်အယ်လ်အီးဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အထဲတွင်အနည်းငယ်မျှသာအယ်လ်အီးဒီတစည်းနှင့်အတူဒါပေမယ့်အလင်းဝင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သောဘယ်မှာထိန်းချုပ်စရာလမ်းနှင့်အတူဖွင့်သည်ဤအပြား panel ကိုအယ်လ်အီးဒီခဲ့ကြပါတယ်" ဟုမာ့ခ်ကပြောပါတယ်။ အလင်းကိုပုံဖော်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမာ့ခ်အရှုံးမပေးချင်ဘူးနှင့်အခြား Fresnel အယ်လ်အီးဒီကြီးမားလွန်းခြင်းနှင့်စျေးကြီးခဲ့ကြသည်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးနဲ့ LED အထုပ်အဘို့အရှာဖွေရေးရှိရာ Charlotte, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားထဲမှာကုန်သွယ်ရေးပြပွဲမှမာ့ခ်ကဦးဆောင် Practilite 602s လမ်းကြောင်းအလင်းအိမ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ "ငါသည်သူတို့နှင့်အတူနည်းနည်းကစားရန်လေနှင့် 602s ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ရန်အဘို့အလို့ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ့်မယ်စဉ်းစားစတင်ခဲ့ပြီး," မာ့ခ်ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါ Practilite 602 variable ကိုလယ်ပြင်လွှမ်းခြုံများအတွက် 3.2-15 ဒီဂရီတစ်ခုအထင်ကြီးပွဲချင်းပြီး-to-ရေလွှမ်းမိုး spec နိုင်စွမ်းတဲ့ 75 "borosilicate Fresnel ဖန်မှန်ဘီလူးရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးရိုက်ကူးဖို့လာပြီယခုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပြီးပေါ့ပါးတဲ့ဆလင်ဒါဆောက်လုပ်ရေးအလွယ်တကူလူတစ်ဦးကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အမြန် Set-up ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ Practilite 602 တစ်ဦးဖန်တီးမှုသေနတ်သမား add ရန်ဆန္ဒရှိမယ်နီးပါးကိုအခြားအထူးပြုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်ရှိရာ Practilite 602s တကယ်တစ်ဦးတည်းလူတီးဝိုင်းများအတွက်ထွန်းလင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခု-လူတစ်ဦးယာဉ်အမှုထမ်းတစ်ဦးစမတ်ဖုန်း interface ကို အသုံးပြု. မီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲချင်းပြီး-to-ရေလွှမ်းမိုးဖု မှလွဲ. အထိခြောက်လ Practilites များ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အရောင်အပူချိန်အဆင့်ဆင့်စမတ်ဖုန်း-enabled ဖြစ်ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုမျိုးတစ်ဦးတည်းလူတီးဝိုင်းအခြေအနေမှာလုံးဝမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
"အမှန်တကယ်ကဘလူးတုသ်ထိပ်ပေါ်မှာရုံချယ်ရီခဲ့," မာ့ခ်ကပြောပါတယ်။ အခုတော့ "ဒါဟာငါတောင်ရှာနေမခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါကကုန်သွယ်မှုပြပွဲမှာလုပ်နိုင်အဘယ်အရာကိုမြင်သောအခါ, ထိုတူသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေခဲ့ကွောငျးထွက်အဲဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုခုမဟုတ်ခဲ့" ကမာ့ခ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အသုံးပြုတဲ့ function ကိုဖွင့် ။
အဆိုပါ 602s များ၏ပြင်းထန်မှုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မမာ့ခ်ရိုက်ကူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအင်တာဗျူးမျိုးအတွက်တာဝန်အထိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ "ကင်မရာ sensor များတိုးတက်ခဲ့ကြပြီးသူတို့နှင့်ကြှနျုပျတို့ပွုသောအင်တာဗျူးများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုအဖြစ်သူတို့သလောက်အလင်းမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်အကြီးအထွက်အလုပ်လုပ်တယ်," မာ့ခ်ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါ Practilite 602 LED ကို Fresnel မှ Kinotehnik မာ့ခ်အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်လူနာနှင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အ illuminating သောပုံပြင်များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သက်သေပြနေသည် Firstline ကို Creative & မီဒီယာ။
Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် ၏သီးသန့်အမေရိကန်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်ပါသည် Kinotehnik ဘလူးတုသ်-enabled အလင်းအိမ် LED ။
1SLED အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Kinotehnik LED Lighting အလင်းရောင် manios ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်တွေ့ လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2019-08-06
ယခင်: axon IBC 2019 မှာ IP ကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးများအတွက်အစွမ်းထက် Solutions ကိုမီးမောင်းထိုးပြ
နောက်တစ်ခု: pixel ပါဝါထပ်တိုး Pre-ရောင်းအားနှင့်စီမံကိန်းပေးပို့ခေါင်းဆောင်များနှင့် software များဖြေရှင်းချက်မှဖောက်သည်များအကူးအပြောင်းကိုကူညီပေးပါ